Takalon’Aina sy ny Tambiny : Politika Manao Ahoana ny An’i Frantsa ? · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 02 Mey 2013 14:58 GMT
Tokony ho telo volana taorian'ny fanapaha-kevitr'i François Hollande hampitsaharana ny fandoavana tambiny ho an'ireo mpanao takalon'aina, dia navotsotra ihany ny ankohonana Moulin-Fournier, izay niteraka sento ho an'ny fianakaviana sy ny namana. Hatramin'izao anefa dia tsy misy fampahafantarana tamin'ny fepetran'izany famotsorana izany.
Nampafantatra tamin'ny fianakavian'ny mizaka zom-pirenena frantsay rehetra manerana izao tontolo izao ny filohan'ny Repoblika Frantsay fa manomboka izao i Lafrantsa dia manaraka ny politika mandà ny fifampiraharahana misy vola amin'ireo mpaka takalon'aina. Milaza izany hoe tapitra hatreo ny fotoanan'ny fandoavan-tambiny.
Fanovana izay efa noheverina hatramin'ny fotoana nitondran'i Sarkozy satria vao maika mandranitra ny mpaka an-keriny ny fandoavana tambiny. Abdoulaye Bah sur Global Voices nanamarika tamin'ny taona 2010 [mg] fa:
Maherin'ny 90% amin'ny famatsiam-bolan'ireo vondrona mpampihorohoro dia avy amin'ny fandoavana onitra. [..] Raha mbola manohy mandòa onitra hamotsorana ireo takalon'ainany ny firenena Tandrefana, dia hameno ny “kaontin-“-n'ireo vondrona mpampihorohoro.
Ny krizy tany Mali no nanafaingana ny fandehan-draharaha. Manomboka izao ny mpiasan'ny fitsikilovana dia tsy maintsy maka volontany ny fomba fifampiraharahany. Fanapahan-kevitra manapaka tanteraka ny teknika frantsay fanao hatramin'izao fotoana izao izany. Ny maodely anglo-saxons kokoa no noraisina.
Inona avy ny tsy itovizana amin'ny anglo-saxons ?
Bernard Kouchner mampahatsiahy ny karazam-panao amin'ny famahana ny olan'ny fakana takalon'aina:
Ampifanoherina matetika ny fanao frantsay izay mandoa sy ny fanao anglo-saxon izay tsy mandoa saingy tsy mazava toy izany ny zava-mitranga, samy manana ny mampiavaka azy avokoa ny raharahan-takalon'aina ary sarotra kokoa tsy araka ny iheverana azy.
Tsy tahaka ny ataon'ny firenena mpiteny anglisy (angletera, Etazonia) izay nolazaina mazava tamin'ny olom-pirenena fa tsy manomam-bola ifampiraharahana amin'olona na vondrona mpaka takalon'aina ny politikam-panjakana, tsy mamaritra na inona na inona ao amin'ny tahirin-kevi-panjakana kosa i Lafrantsa. Mampitandrina fotsiny amin'izay mety ho fisian'ny fakana an-keriny izy.
Nametraka ny fanovana ifotony noho izany i François Hollande tamin'ny fanononana ny fandavana frantsay hanaiky ny fitakiana vola tambiny. Saingy ny fanjavozavon'ny famotsorana ireo takalon'aina farany teo tao Kamerona no memetraka ny eritreritra fa toa sarotra kokoa ny toe-draharaha.
Fa ahoana ny amin'ny namotsorana an-dry Moulin-Fournier ?
Ilay ankohonana frantsay nalaina an-keriny tamin'ny 19 febroary izay nolazain'ny Boko Haram, vondrona mpampihorohoro nizeriana, fa nataony dia navotsotra tamin'ny 19 avrily. « Nandoa tamby tamin'ny Boko Haram ve i Lafrantsa? » hoy ny fanontanian'ny Slate Afrique ny ampitson'ny nanafahana azy ireo:
Maro ny fanontaniana am-pisainana lalina nipoitra ka nahatsiarovana ny fitakian'ny Boko Haram, rehefa nanamafy ity sekta nizeriana ity fa izy no rangory nanao ny fakana ankeriny ity ankohonana frantsay ity tany amin'ny faritr'i Dabanga, faritra farany avaratr'i Kamerona, tamin'ny 19 febroary lasa teo
Nanamarika ny fahanginan'ny fitondrana kameroney sy frantsay amin'ity raharaha ity ihany koa ny lahatsoratra.
(Lahatsarin'ny fahatongavan'ireo nalaina ankeriny taorian'ny famotsorana azy ireo, avy amin'i zoominwal)
Nanamafy ny fandikana ny fanapaha-kevitra noraisiny tsy handoa tambiny ny tao amin'ny lapam-panjakana Elysée. nampahalala ny mpikambana ao amin'ny Boko Haram, tao amin'ny lahatsary navoaka tamin'ny 25 febroary, fa maniry ny hamotsorana ireo fianakavian-dry zareo « nagadraina any Nizeria sy ao Kamerona ry zareo. Niditra nanelanelana fitondrana nizeriana. Saingy tsy nampahafantarina ny antsipirihan'ny fifampiraharahana.
Etsy ankilany kosa ry Moulin-Fournier dia mitantara fotsiny ny zava-tsarotra niainan'izy ireo tamin'ny mpampiely vaovao ao amin'ny trano fiasan'ny mpiandraikitra ny seraseran'ny krise Vae Solis ary tsy milaza na inona na inona momba ny fepetram-pamotsorana azy ireo. Mbola baraingo tanteraka ny raharaha noho izany.